युगसम्बाद साप्ताहिक - मनलाग्दो गर्न पायौं तर ....
Sunday, 02.23.2020, 07:43am (GMT+5.5) Home Contact
मनलाग्दो गर्न पायौं तर ....
Tuesday, 06.21.2016, 11:43am (GMT+5.5)
कोहीसंग कसैको विचार मिल्नुपर्छ भन्ने छैन । धेरैको धेरैथरि विचार हुन्छन् । फरक के हो भने समग्रमा ती विचारहरुको कदर भयो कि भएन भन्ने मात्र हो । अहिले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सबैलाई छ । तर, अभिव्यक्ति के काम, कुरा वा विषयसंग सम्बन्धित हुने भन्ने प्रश्न पनि कायम छ । बोल्न पाउँदैमा सबै कुरा प्राप्ति हुने हैन । अहिले नेपाली जनताले बोल्न पाएका छन्, अलि जान्नेसुन्नेले मनलाग्दो भटट्याए आफ्नो दूनो सोझ्याएका छन् । ती सबै नेपाली जनताको नाममा भैहेको छ । निरीह जनताको अवस्था भने जस्ताको तस्तै हैन किन दिन प्रतिदिन खस्किदो छ । जनताको आवाज, जनताको भावना, जनताको आकांक्षाको नाममा राम्रो व्यापार भैरहेको छ ।
२०४६ सालदेखि यही नाममा दुकान चल्यो । २०५८ पछि राजाले जनताकै नाममा आफ्नो नया“ दुकान खोले र अहिले त्यो दुकान बन्द गरियो अनि सुरु भो नयाँ दुकान– गणतन्त्रको । जनताले दुःख पाए, मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भयो भनेर सुरु गरिएको गणतान्त्रिक नयाँ दुकान पनि जनतालाई ठग्ने नया“ चालबाजीको रचना गरिएको रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि हुँदैछ । कसैले केही राम्रो गर्न खोज्यो भने त्यसैको खोइरो खन्ने ? अहिले त्यस्तै स्थिति छ । राजनीतिलाई ठूलो र खुला बजारका रुपमा लिनेहरुले यो बजारलाई सधैं आफ्नै लागि मात्र नाफा भैरहोस् भन्ने चाहँदारहेछन् ।
जनताको दुहाई दिएर, जनताको वकालत गरेर कहिल्यै नथाक्नेहरुले जनहितसंग सरोकार राख्ने के कति काम गरे भनेर सोध्यो भने उत्तर नै छैन । बरु लोकतन्त्र–गणतन्त्र भन्दै देश कमजोर पार्ने काम भयो । लोकतन्त्र भनेर अरुको विचारको कदर गर्न नसक्ने, लोकतन्त्र भनेर दलीय भागवण्डाको किचलोमै रुमल्लिइरहनेहरुबाट कसरी लोकतन्त्रले फस्टाउने मौका पाउला ? अहिले पनि सत्ताका लागि सहमतिको रटान छ । एउटा झर्छ, अर्को उक्लिन्छ । यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको सामान्य सिद्धान्त हो । तर यहाँ सबै सत्तामै पुग्नुपर्ने र त्यस्तो सत्ताको शिखरमा आफैं बस्नुपर्ने माग र अडान छ ।
यस्तो माग र अडानले सरकार जहिल्यै अस्थिर, देश जहिल्यै कमजोर । परिणामः विदेशीको खेलमैदान बन्दै कहिलेकाहीं त मल्लयुद्धको अखाडा नै बन्नेगरेको छ । राज्यले भोगिरहेको अहिलेको जटिल परिस्थितिको कसरी सहज निरुपण हुन्छ भन्नेतिर कसैको ध्यान छैन । कसरी सरकार असफल हुन्छ र त्यसबिरुद्ध आवाज उठाउँ भन्दै मौका कुरेर बस्नेहरु छन् यहाँ । देश र जनता हैन, आफू र आफ्ना कार्यकर्ताकै मात्र चिन्ता छ । लोकतन्त्रको बदनाम गराउने काम लोकतन्त्रका संवाहकहरुबाट भैरहेको छ । राजनीतिक जोडघटाउ र जु“घाको लडाइ“ले राज्य संचालनका संयन्त्रहरु तहसनहस भएका छन् । एकले अर्कोमाथि दोष र जिम्मेवारी पन्छाएर आफू उम्किने प्रपञ्च जारी छ ।
मुलुक अस्तव्यस्तताबाट सहजतातर्फ आउनका लागि दबाब दिने कोही छैनन् । सबलाई केवल सत्ता मात्र चाहिएको छ । जनताको मागका नाममा आफ्नो स्वार्थको खेती गरेर भ्रमको पहाड खडा गरिएको छ । जनताप्रति थोरै मात्र जिम्मेवारी कसैमा भैदिएको भए १३ महिनासम्म भूकम्प पीडित त्रिपालमुनी बस्नुपर्ने थिएन ।
के नेताहरुमा मुलुक र जनताप्रति कुनै जिम्मेवारीबोध छैन त ? त्यसो भनेर राजनीतिलाई पुरै दुत्कार्न पनि सकिन्न । तर, घटनाक्रम र दृश्यहरुले त्यस्तै देखाउँछ । नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुमा कुनै गुण नै छैन त ? के उनीहरु राष्ट्रघाती नै हुन् त ? यत्रो संघर्ष, त्याग, बलदानी मित्थ्या नै हो त ? २००७ सालदेखि २०६२।०६३ सम्मको आन्दोलन र त्यो आन्दोलनले दिएको परिवर्तन ‘कागताली’ मात्रै हो त ? यस्ता प्रश्नहरु जनजनको मुखबाट निस्किरहेका छन् र नेताहरुको गतिविधिले यस्तै प्रश्न जन्माउँछ ।
यसको एउटै कारण भनेको राजनीतिक संस्कृतिको अभाव हो । राजनीतिक संस्कृति निर्माण नहुँदासम्म यहाँ कुनै पनि सरकारले तोकिएको अवधिसम्म शासन गर्न पाउँदैन । कुनै पनि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम जतिसुकै राम्रा हुन्, त्यसलाई स्वागत गर्ने गरिंदैन । बिरोधको नाममा बिरोध गरेर आफ्नो राजनीतिक दुकान चलाउने धन्दा मात्र भैरहेको छ । यसलाई मलजल गर्ने काम देशका बुद्धिजीवी भनेर कहलिएका एकथरिले गरिरहेका छन् । उनीहरुको टिप्पणी र पत्रपत्रिकाको लेख अनि टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताहरुमा यस्तै कुरा आउँछ । अर्कोथरि बुद्धिजीवीहरु छन्– यो परिवर्तन अमूक दलका अमूक नेताको अग्रसरतामा मात्र भएको हो र यसको जस उसले मात्रै पाउनुपर्छ र सुखभोग पनि उसैले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने । अर्कोथरि छन्– यो नेपालमा सबै गलत छन्, सबै विदेशीले गरिदिएको, आफू बाहेक अरु कोही पनि जान्ने–सुन्ने छैनन्, इमान्दार छैनन्, देशभक्त पनि छैनन् ।
जब हामी राजनीति भनेको आफूले आस्था राखेको, आफू संलग्न भएको दल र त्यो दलको पनि कुनै गुट मात्रै हो भन्ने ठान्छौं तबसम्म यो मुलुकको अवस्थामा कुनै सुधार हुनेछैन । वर्तमान राजनीतिक गतिविधिको विश्लेषण गर्दा सामान्य मानिसले पनि यही कुरा भन्छ । यो फगत आरोप मात्र हैन, नेताहरुले देखाउने व्यवहार अनि कार्यकर्ताको सक्रियता यस्तैमा केन्द्रित देखिन्छ । आफ्ना पक्षकालाई जसरी पनि बचाउने र बनाउने, अरुलाई दुत्कार्ने र वेवास्ता गर्ने । यो राजनीतिक दलका कोरा कार्यकर्तामा मात्र हैन, पेशागत संगठनमा पनि देखिन्छ । यसैले गर्दा भन्न कर लाग्छ– हामीले लोकतन्त्र भनेर मनलाग्दो बोल्न त पायौं, त्यसभन्दा बढी केही गर्न सकेनौं ।
दुई सय वर्षअघिको त्यो सन्धि (03.09.2016)
केही त थियो सुशील कोइरालामा (02.18.2016)
हामी कुन बाटो रोज्दैछौं ? (01.13.2016)
सरकार सरकार जस्तो भएन (01.05.2016)
राष्ट्र असफलताको खतरा (12.22.2015)
नेपाल यो चक्रब्यूहबाट कसरी मुक्त होला ? (12.15.2015)
मधेशलाई जलभण्डार बनाउने ग्राण्ड डिजाइन (12.01.2015)
स्रोत–साधन छ कार्यतत्परता र व्यवस्थपन छैन (11.25.2015)
राष्ट्रियताका भाषण मात्रै कि काम पनि... (11.17.2015)
नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र (11.10.2015)
भारतीय नाकाबन्दी : त्यो बेला र यो बेला (11.03.2015)
अब उठाऔं ग्रेटर नेपालको मुद्दा (10.27.2015)
अबको बाटो आत्मनिर्भरतातिर (10.06.2015)